लगातार नेप्से घटाइले चिन्तित लगानीकर्ता, ३.५० अंकले घट्दा नेप्से १२७२.४८ विन्दुमा, १२ समूहको परिसूचकमा कुनको बढ्यो कुनको घट्यो ? | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण लगातार नेप्से घटाइले चिन्तित लगानीकर्ता, ३.५० अंकले घट्दा नेप्से १२७२.४८ विन्दुमा, १२ समूहको परिसूचकमा कुनको बढ्यो कुनको घट्यो ?
on: June 12, 2019 नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
लगातार नेप्से घटाइले चिन्तित लगानीकर्ता, ३.५० अंकले घट्दा नेप्से १२७२.४८ विन्दुमा, १२ समूहको परिसूचकमा कुनको बढ्यो कुनको घट्यो ?
जेठ २९, काठमाडौं (अस) । बुधवार नेप्से परिसूचक ३ दशमलव ५० अंकले घटेर बन्द भएको छ । १ हजार २७६ दशमलव शून्य ९ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक ११ मिनेटमा बढेर १ हजार २७७ दशमलव शून्य ४ विन्दुसम्म पुगेको थियो भने सो पछि अन्त्यसम्म घटेर १ हजार २७२ दशमलव ४८ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । यस दिन परिसूचक घटेर १ हजार २६७ दशमलव ३२ विन्दुसम्म पुगेको थियो । गत सातादेखि घटेको परिसूचक यस साताको बुधवार थोरै अंकले बढेको थियो भने बुधवार पुन घट्न पुगेको छ ।
कारोबार अवधिभर १२ समूहको परिसूचकमा व्यापार, होटल र अन्य समूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी समूहको परिसूचक घट्दा समग्र नेप्से परिसूचक शुन्य दशमलव २७ प्रतिशतले घट्न पुगेको छ । व्यापार समूह तर्फको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको शेयर मूल्य बढेसँगै सो समूहको परिसूचक ४ दशमलव ६४ प्रतिशतले बढेको छ । साथै, निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक १ दशमलव १२ प्रतिशतले घटेको छ ।
यसदिन रू. ५० करोड २६ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । यस दिनका कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा ४ दशमलव ५३ प्रतिशत बढेको हो । सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन शून्य दशमलव ५० अंक घटेर २७२ दशमलव ३५ विन्दुमा बन्द भएको छ । कारोबार भएका १७४ कम्पनीमा ५० कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ९१ कम्पनीको घटेको छ । साथै, ३३ कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको संस्थापकतर्फको सर्वाधिक कारोबार
दिनभरिको कारोबारमा ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको संस्थापक तर्फको सर्वाधिक रू. ७ करोड १२ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको अन्त्यमा शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. १७४ कायम भएको छ । दोस्रोमा शिवम् सिमेण्टको रू. ४ करोड २५ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. ६६५ पुगेको छ । तेस्रोमा प्रभु बैंकको रू. २ करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङको प्रतिकित्ता ४४ ले बढेर सर्किट ब्रेक
बुधवार साल्ट ट्रेडिङको कर्पोरेशनको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. ४४ ले बढेर सर्किट ब्रेक लागेको छ । कम्पनीको मूल्य प्रतिकित्ता रू. ४८४ पुगेको छ । लामो समयपछि कारोबार भएको सो कम्पनीको मूल्य बढेर सर्किट लाग्न पुगेको हो । दोस्रोमा हालै आईपीओ जारी गरी नेप्सेमा सूचिकृत भएको गणपति माइक्रोफाइनान्सको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. १३ ले बढेर रू. २७३ पुगेको छ । मंगलवार ९ अंकले घटेको नेपाल हाइड्रो डेभलपरको शेयर मूल्य बुधवार पनि ७ प्रतिशतले घटेको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. १० ले घटेर रू. १३१ पुगेको छ । दोस्रोमा मल्टीपर्पस फाइनान्सको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. १५ ले घटेर रू. २ सय पुगेको छ ।